ဥာဏ်ရည်မမှီသူများအတွက် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း လှိုင်သာယာတွင် ဖွင့်လှစ်ရန်ရှိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဥာဏ်ရည်မမှီသူများအတွက် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း လှိုင်သာယာတွင် ဖွင့်လှစ်ရန်ရှိ
ဥာဏ်ရည်မမှီသူများအတွက် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း လှိုင်သာယာတွင် ဖွင့်လှစ်ရန်ရှိ
Posted by etone on Dec 3, 2010 in News |2comments
လှိုင်သာယာမှ ဥာဏ်ရည်မမှီသူများအတွက် သင်တန်းကျောင်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိဥာဏ်ရည်မမှီသူများ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာ့ပထမဆုံးသော ထရိန်နင်းစင်တာတစ်ခု လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ဆောက်ရန်ရှိကြောင်းသိရသည် ။
အဆောင်သဘောမျိုး ထားရှိ့မည် ဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှူများကိုလည်း လေ့ကျင့်ပေးရုံမျှမကပဲ သင့်လျှော်ရာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှူမျိုး ၊ အားကစားနည်းများကိုလည်း သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။ ဥာဏ်ရည်မမှီသူ ကလေးများကို ဦးစားပေးပြီးထားရှိမှာဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအတွင် ဥာဏ်ရည်မမှီသူ အယောက် ၂၀၀ခန့် ရှိကြောင်းလည်း သတင်းရရှိသည် ။
ဒီလိုကျောင်းမျိုး ဒီနိုင်င်ငံမှာဖွင့်တဲ့ သတင်း ကြားရတော့ ၀မ်းသာသဗျာ …. ဘာကြောင့်ဆိုတော့
ကျနော်တို့ရွာမှာ .. ရွာဆိုတော့ရွာစရိုက်ပေါ့ဗျာ … ဆိုလိုတာက အမြင်မတော်ရင် ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးကြည့်မနေကြဘူးဗျ။ မြို့မှာတော့ ..ဟိုဘက်ခန်း ဒီဘက်ခန်းတောင်နာမယ်မသိကြဘူးတဲ့ဗျား …
အံ့ရော …။ ရွာထဲက မြီးကောင်ပေါက်လေးတယောက် က ဥာဏ်တော့ မမှိတမီပေါ့ဗျာ .. ရက်မပြည့်ဘွဲ့လေး မြို့
ကရခဲ့တာဗျ ..။ အဲဒါပိုဆိုးနေတာ … ရွာထဲက လူကြီးသူမတွေ ညနေ ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းနဲ့ စကားပြောကြရင် ၀င်ဝင်ပြီး
ဘာမသိညာမသိနဲ့ ၀င်ဝင်ပြောလေ့ရှိတယ် … အစကတော့ ဘယ်သူမှ သိပ်မရိပ်မိကြသေးဘူး …. နောက်တော့
နဲနဲ တရားလွန်လာတော့ .. တချို့ရိပ်မိကြတယ် .. ဒါနဲ့ မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး ချော့မော့ပြီး … ဆရာဝန်ဆီခေါ်သွာရတယ် … ဆရာဝန် ကတော့ ..သိပ်တော့ပြဿနာ မရှိပါဘူးတဲ့ … ဒိအရွယ်ဒီလိုဘဲဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ …လူနာကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းပြီး .. ဆရာဝန်က ရှင်းပြတယ် .. အရွယ်ရောက်လို့မှ
ရီးစားစကား အပြော မခံရ … ယောကျာင်္းလေးတွေ၇ဲ့ ဂရုစိုက်တာမခံရရင် … ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး …
လူရာဝင်ချင်တဲ့ သဘောနဲ့ လူကြီးလူကြီးမှန်း မသိ .. ကိုယ့်စကား ဘယ်ရောက်လို့ေ၇ာက်မှန်းမသိ .. သူများ ဘာပြောချင်တာလဲ .. ဘယ် trend ကိုသွားနေတာလဲ ..။ ဘာနဲ့နိဂုံးချုပ်ချင်လို့ ဘယ်လိုအစပျိုးနေတာလဲ .. ဆိုတာတွေကိုနားမလည်ဘဲ .. လူကြီးဝိုင်းဝင်ဝင်ပြီး နှောက်ယှက်သလိုဖြစ်နေတာပါတဲ့ဗျ …။
အဲဒီကျောင်းပို့ လိုက်ရင် အခြေအနေများ ပို ကောင်းလာမလား အကြံရလို့ပါ …။
နေရာရှိသေးလားဗျာ.. အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ပို့ချင်လို .. သူတို့က ဦးနှောက်ကို မရှိတော့တာ ..ရရင် အကြောင်းပြန်ပေးပါ..